Efa nifanaraka rahateo aloha ny fanjakana sy ny mpandraharaha ara-tsolika eto ny amin’ny hitazomana ny vidin-tsolika. Na izany aza dia tsy voafaritra mazava tanatin’ny fifanarahana hoy izy ny hoe hatramin’ny oviana no ho voatazona amin’io vidiny amin’izao fotoana izao io ny vidin-tsolika. Etsy andaniny dia nanambara ity mpahay toekarena ity fa kely loatra ny fahafaha-mitahiry na ny capacité de stockage eto an-toerana ka tsy afaka hisitraka io fitotonganam-bidin-tsolika io i Madagasikara. Araka izany dia tsy hisy fiantraikany mivantana izany satria na hividy aza dia tsy hisy ny toerana mihoatra hafa afaka hitahirizana ny solika. Na izany aza dia tokony hiomana fatratra ny fitondram-panjakana fa matoa ny vidin-tsolika tafidina ambany be tahaka izao dia hisy fiakaram-bidy mafy be ho valin’izany rehefa hivaha izao olana izao. Tsy maintsy hihazakazaka mafy haka tombony hanaronana ny fatiantoka ireo firenena mpamokatra solika ary lalànan’ny tsena izany fa tsy fanararaotana hoy hatrany ity mpandalina toekarena ity.